फेसबुक फण्डा - साप्ताहिक
डाक्टर : पिउने बानी छ भने अलि कसरत पनि गर्नुपर्छ है ।खडानन्द : अँ, भट्टीसम्म त हिंडेर जाने गर्‍या छु डाग्डर सा’प । पुरा पढ्नुहोस्
आई लभ यू भन्न नजानेरआलबु भन्नेले पाँचवटी केटी पट्याइसकेछ आफू भने बुङ्गाको बुङ्गै । पुरा पढ्नुहोस्
खडानन्दकी पत्नीले पतिलाई छड्के नजरले हेर्दै कपडा फेरिन्, रातको ११ बजे ।पत्नी : के छ बिचार ? अब के गर्ने ? त्यो त याद छ होला नि, मेरो प्यारो खडुलाई ।खडानन्द : चिप्लो घस्नु पर्दैन, मलाई कुरोसुरो केही थाहाँ छैन, यति रातिचाहिँ म मरे पनि कपडा धुँदिन, भन्देको छु मैले । पुरा पढ्नुहोस्
खडानन्द र उनकी पत्नी बेलुका खाना बनाउने बेलामापत्नी : के बनाऊँ आज ?खडानन्द : स–साना कुरालाई तिलको पहाड बनाउन छोडेर अरू जे बनाए पनि हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
थोत्रो स्कुटर चढ्ने बेला पटक–पटक म बसौं भनेर सोध्थी....तर डोली चढ्ने बेलामा एकवचन पनि म के गरौं भनेर सोधिन्— अलच्छिनी । पुरा पढ्नुहोस्
हरिबोल : ओए खडु, पत्रिका पढ्दा तँ राशिफल हेर्छस् कि हेर्दैनस् ?खडानन्द : हेर्दिनँ यार !हरिबोल : किन नहेर्‍या त ?खडानन्द : विश्वासै लाग्दैन के हेर्नु ? अब हेर न । म अविवाहित मान्छे, तर मेरै राशिफलमा चाहिं प्राय सन्तानसुख र पुत्रलाभ लेख्या हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
न्युज हेर्न पनि लाज लाग्ने भैसक्यो । समाचार वाचन गर्ने केटी भन्छे— हामी देखाउँछौं तपाईंलाई भित्री कुरा । कलि लागेछ नि बरै, अब त । पुरा पढ्नुहोस्
अस्ति एउटा चेक साट्न बैंक गाको, क्यासियर केटीले बिस्तारै चेकको पछाडी आफ्नो फोन नम्बर लेख्नुस् न भनी । हत्त न पत्त नम्बर लेखेर दिएको, सात दिन भयो आजसम्म कल गरेकी छैन यार त्यसले । पुरा पढ्नुहोस्
जीएफ : म माथी धेरै युवाहरू मर्छन्, किन होला ?खडानन्द : हैट्, के कुरा गरेको हौ ? तिमी अस्पतालको बेड हौ र ???? पुरा पढ्नुहोस्